Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Fidji » Fiji dia nanosika mankany amin'ny fisokafan'ny fizahan-tany amin'ny volana Desambra 2021
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovao Mafana Fidji • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny vaksiny tsirairay dia mitondra an'i Fiji dingana iray hanakaiky kokoa ny fahafahany mandray ireo vahiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indray.
Maherin'ny 92% ny olona lasibatra ao Fiji no nahazo vaksiny COVID-19 voalohany.
Fizahantany Fiji dia mandefa hetsika vaovao eo an-toerana hamporisihana ny fanaovana vaksiny.
Ny indostrian'ny fizahantany Fijian dia nandray betsaka ny Fanoloran-tena Care Fiji.
Miaraka amin'ny 92% ny mponina kendrena nahazo ny fatra voalohany tamin'ny vaksiny COVID-19 ary 41% mahery izao dia vita vaksiny tanteraka, i Fidji dia manao fandrosoana lehibe mankany amin'ny tanjona hisokatra amin'ny Desambra 2021, satria ny vaksininy tsirairay dia mitondra an'i Fidji dingana iray akaiky kokoa hahatongavana amin'ny afaka mandray vahiny vahiny amin'ny nosy indray.
"Eo amin'ny sampanan-dalana amin'ny vanim-potoana fitsangatsanganana sy fizahan-tany vaovao isika, izay misy ny vaksinin'ny COVID-19 amin'ny famerenana ny dia iraisam-pirenena," hoy ny minisitry ny varotra, ny varotra, ny fizahan-tany ary ny fitaterana, Hon. Faiyaz Koya. “Ny fanaovana vaksiny ny vahoaka kendrentsika dia tsy manome antoka fa hiaro ny vondrom-piarahamonintsika isika, fa vonona ihany koa izahay handray an'izao tontolo izao hiverina any amoron'ny morontsiraka sy hamerina ny asa fijaliana.”
Ao anatin'ny fiomanana amin'ny fanokafana an'i Fiji indray, Fiji fizahan-tany dia nanangana hetsika vaovao eo an-toerana mba hampirisihana ny Fijiana rehetra hanao vaksiny ary ho vonona ny handeha hamerina indray rehefa esorina ny fameperana. Hafatra tsotra, fa hafatra iray lehibe: “Ity no fitifirana tsara indrindra vitantsika rehefa mandeha: manao vaksiny ary miomàna.” Manatevin-daharana ny hafatra momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany any fizahan'i Fiji ny fanentanana.
Hiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpandeha na ny eo an-toerana amin'ny fisokafan'ny sisintany, ny Indostrian'ny fizahantany Fijian dia nandray betsaka ny Fanoloran-tena ho Fijiana Fiji; fari-pahaizana momba ny fahasalamana sy fiarovana azo antoka indrindra nankatoavin'ny OMS natao hampifanarahana ny indostria amin'ny fenitra fitsangatsanganana azo antoka ao anatin'ny tontolo aorian'ny COVID. Ireo mpandraharaha fizahantany dia miasa mba hahatratrarana vaksiny 100% ho an'ny mpiasa mendrika rehetra ary hahazo ny CFC 100% Stamp Vaksinin'ny CFC raha vantany vao vita. Amin'izao fotoana izao dia misy trano fandraisam-bahiny 46 any Fiji izay nahavita nanao vaksiny 100% ny mpiasan'izy ireo.
Ankoatr'izay, ny fizahantany Fiji Amerika Avaratra dia nandefa fampielezan-kevitra momba ny marketing, antsoina hoe "Find Your Bula" mba hampirisihana ny mpanjifa hanonofy sy handamina ny diany lavorary mankany Fiji. Ny fanentanana dia miompana amin'ny quiz hanampiana ireo mpandeha hahita ny 'Bula' ary hahazo sosokevitra momba ny dia mifanaraka amin'ny safidiny. Ny fampielezan-kevitra dia miala amin'ny fiarahabana Fijianina “bula” - teny iray misy dikany maro ao anatin'izany ny arahaba, fahasambarana, fahasalamana, ary ny herin'ny fiainana.